BOYAQ10 Treatment Essence 115g | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
ပစ္စည်းအမျိုးအစား အားလုံး ဖက်ရှင် အမျိုးသမီးများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ညအိပ်ဝတ်စုံများ အသုံးအဆောင်များ အမျိုးသားများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ခြေအိတ်များ အသုံးအဆောင်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသား) ဂျင်းဘောင်းဘီများ ရှပ်များ နာရီများ အိတ်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသမီး) ဂါဝန်များ အိတ်များ နာရီများ လက်ဝတ်ရတနာများ TOP BRANDS TIMBERLAND NICHII OUTDOOR PRODUCTS COZY CORNER SPRINGFIELD YANGOODS အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး ရေမွှေးများ အမျိုးသမီးသုံး အမျိုးသားသုံး မိတ်ကပ် မိတ်ကပ်ပစ္စည်းများ အလှပြင် ပစ္စည်းများ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်းများ မျက်နှာအတွက် ကိုယ်ခန္ဒာအတွက် အလှအပရေးရာ စက်များ လက်သည်းအလှအပ ခြေ/လက်အလှအပ လက်သည်းနီ/ခြေသည်းနီများ ဆံကေသာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ခေါင်းလျှော်ရည် နှင့် ပျော့ဆေးများ ဆံကေသာသုံး ပစ္စည်းများ အမျိုးသားများအတွက် အသားအရေအတွက် မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်များ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆေးဝါးမျိုးစုံ ကျန်းမာရေးအတွက် ကိရိယာများ ဖြည့်စွက်ဆေးများ Top Brands MAYBELLINE YVES ROCHER MA'SURI POND'S L'oreal ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ စမတ်ဖုန်းများ ခလုတ်ဖုန်းများ ကြိုးဖုန်းများ ဆက်စပ်ပစ္စည်များ စမတ်နာရီများ နားကြပ်များ စပီကာများ မမ်မိုရီကတ်များ ဖုန်းမျက်နှာပြင်အကာ ဖုန်းအားသွင်းကြိုးများ ဖုန်းအိတ်နှင့်ကာဗာများ ဘလူးတုသ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပါဝါဘန့်များ တက်ဘလက်များ iPadများ ၈လက်မနှင့်အထက် ၈လက်မအောက် TOP BRANDS SAMSUNG XIAOMI APPLE SONY HUAWEI LENOVO ကွန်ပြူတာများ လက်ပတော့ပ် များ နုတ်ဘုတ်များ Macbook များ ပရင်တာနှင့်စကန်နာများ ဘက်စုံသုံးပရင်တာများ လေဆာပရင်တာများ ရုံးသုံးပရင်တာများ ဟာ့ဒစ်စ်နှင့်မန်မိုရီကဒ်များ ဟာ့ဒစ်စ်များ မမ်မိုရီကဒ်များ မမ်မိုရီ စတစ်များ တွဲဖက်ပစ္စည်းများ လက်ပတော့ပစ္စည်းများ နားကြပ်နှင့် စပီကာများ ကီးဘုတ်များ ဒီဗီဒီစက်များ နက်ဝေါ့ပစ္စည်းများ ပရောဂျက်တာများ အခြားပစ္စည်းများ မောက်စ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ ကာဗာနှင့်အိတ်များ ဘတ်ထရီ နှင့် အားသွင်းကြိုးများ ကေဘယ်လ် ကြိုးများ ဒက်စတော့်ပ်နှင့်မော်နီတာများ All-in-ones တာဝါများ မော်နီတာများ TOP BRANDS Acer HP Asus ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ အိမ်သုံးဂိမ်းစက်များ အိတ်ဆောင်ဂိမ်းစက်များ ဂိမ်းစက်တွဲဖက်ပစ္စည်းများ ဂိမ်းခွေများ Playstation ဂိမ်းခွေများ Xbox ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ Nintendo Wii ဂိမ်းခွေများ Nintendo DS ဂိမ်းခွေများ အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကင်မရာများ ကင်မရာများ ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာများ ပိုလာရွိုက်ကင်မရာများ ဗီဒီရိုကင်မရာများ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မမ်မိုရီကဒ်များ ဆယ်လ်ဖီစတစ်များ ဖျော်ဖြေရေးစက်ပစ္စည်းများ တီဗီများ LED တီဗီများ စမတ်တီဗီများ Plasma တီဗီများ Blu Ray နှင့် DVD စက်များ DVD Players Blu Ray Players iPod နှင့် MP3 များ နားကြပ်များ MP3 နှင့် အသံဖမ်းစက်များ စပီကာနှင့်အသံချဲ့စက်အသေးများ တီဗီ၊ဗီဒီယိုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 3D မျက်မှန်နှင့် အခြားပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းရုပ်ရှင်စနစ်များ စပီကာစနစ်များ စပီကာများ စပီကာများ ဒီဂျေ နှင့် ကာရာအိုကေ Hi-Fi စနစ် ကားဂျီပီအက်စ်နှင့်အသံစနစ်များ ကားတွင်းသုံးတီဗီများ TOP BRANDS Samsung Panasonic Philips Sony JVC အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အိမ်သုံးပစ္စည်းအကြီးများ ရေခဲသေတ္တာနှင့်ရေခဲစက်များ ပန်ကာများ လေအေးပေးစက် အ၀တ်လျှော်စက် အိမ်သုံးပစ္စည်းအသေးများ ဖုန်စုပ်စက်များ မီးပူ ရေနွးအိုးနှင့်ရေပူပေးစက်များ လေသန့်စင်ပေးစက် ရေပူ၊ရေအေးစက် အ၀တ်အထည်ထိန်းသိမ်းမှု ရေသန့်စက်များ လျှပ်စစ်မီးများ မီးဖိုချောင်သုံးစက်ပစ္စည်းများ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ ထမင်းပေါင်းအိုး မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖို ဟင်းချက်ပစ္စည်းများ ရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိပ်ခန်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်နှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများ အိမ်ပြင်ပသုံးစက်ကိရိယာများ အိမ်တွင်းအလှဆင်ပစ္စည်းများ ပရိဘောဂများ အိမ်သုံး ရုံးသုံး TOP BRANDS Samsung New World Hisense ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ဂဏန်းပေါင်းစက်များ စက်ကိရိယာများ ကလေးများအတွက် ကလေးငယ်များ စောင့်ရှောက်မှုပစ္စည်းများ အသုံးအဆောင်များ အခြားကလေးသုံး ပစ္စည်းများ ကစားစရာများ Hand Fidget Spinners စားသောက်ကုန်များ စားသောက်ကုန်နှင့်အချိုရည်များ စားသောက်ကုန်များ အချိုရည်များ ၀ိုင်နှင့်ယမကာများ အားကစားနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး အားကစားပစ္စည်းများ စကိတ်ဘုတ်များ အခြား အကြောင်းအရာကဏ္ဍများ ကားနှင့်ဆိုင်ကယ်သုံးပစ္စည်းများ ပွဲများနှင့်လက်မှတ်များ စာအုပ် နှင့် စာရေးကိရိယာများ ဈေးဝယ်လှည်း အကူအညီ လိုအပ်လျှင် Login ပင်မစာမျက်နှာ အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး ဆံကေသာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ခေါင်းလျှော်ရည် နှင့် ပျော့ဆေးများ BOYA Q10 Treatment Essence 115g BOYA Q10 Treatment Essence 115gBy BOYA (6) သုံးသပ်ချက် ရေးရန် > အသေးစိတ် ကြည့်ရှုရန် အဓိက အကြောင်းအရာများဂျပန်နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဆံပင်သားကို အားဖြည့်ပေးခြင်းဗီတာမင်များပြည့်ဝစွာပါဝင်ခြင်းဆံပင်များကို ပျော့ပျောင်းစေခြင်းဆံပင်အကျွတ်သက်သာခြင်းဆံပင်သားကို သန်မာစေခြင်း Ks 3,200 ယခု ၀ယ်ယူရန် မှတ်ထားရန် ရောင်းချသူ7Seas Winner Trading Co.,Ltd ပစ္စည်းပို့ရန် ကြာချိန်2-4ရက် ရုံးဖွင့်ရက်အတွင်း ပို့ပေးပါသည်။ ပစ္စည်းရောက် ငွေချေစနစ် ၇ရက်အတွင်း အခမဲ့ပြန်ပို့နိုင်မှု အသေးစိတ်ကြည့်ရန် : Return Policy ကုန်ပစ္စည်း စစ်မှန်မှု သုံးသပ်ချက်များဖော်ပြချက်အညွှန်းအချက်အလက်များဝယ်ပြီးပစ္စည်း ပြန်ပို့ခြင်း/ပြန်လဲခြင်း5မှတ် (4)4 မှတ် (0)3 မှတ် (1)2 မှတ် (1)1 မှတ် (0)
ပျမ်းမျှအမှတ်ပေးချက် 4,26 နှုန်းအား အခြေခံ၍ ဤကုန်ပစ္စည်းအား သင်ယခင်က သုံးစွဲဖူးပါသလား?5432 1 သုံးသပ်ချက် ရေးရန် အမျိုးအစား ခွဲခြားရန် ပြုလုပ်သည့် နေ့စွဲ အမှတ်ပေးချက်အများဆုံး အဆိုးဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ချက် မှတ်ချက်အားလုံးနဒီ2016 ဒီဇငျဘာ 12 Q10 Treatment Essenceဆံပင်အဆီပြန်လို့ ခဏခဏခေါင်းလျော် နေရတာ ဒီ q1o essence နဲ့မှ အဆင်ပြေတော့တယ် နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်Mi Mi Myat2016 ဒီဇငျဘာ 8 Quality is no joking!!!BOYA Treatment essence leave your hair so nice and soft. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန် Boya မှ ထုတ်လုပ်သော Q10 Treatment Essence သည် ဂျပန်နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး ဆံပင်ကို အထူးပင် အားဖြည့်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဗီတာမင်များပြည့်ဝစွာပါဝင်သောကြောင့် ဆံပင်များကို အထူးပင်ပျော့ပျောင်းစေမှာ ဖြစ်ပြီး ဆံပင်အကျွတ်သက်သာမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ဆံပင်သားကိုလည်း သန်မာစေရုံသာမက ဆံပင်နှစ်ခွဖြစ်ခြင်းများကို သက်သာစေပြီးဦးရေပြားကိုလည်း အေးမြစေပါသည်။ ထို့အပြင် ဆံပင်အဆီထွက်ခြင်းကို သက်သာစေပါသည်။ ရနံ့လးမှအစ မွှေးနံ့သင်းပျံ့သည့်အတွက် လူတိုင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ယခုပစ္စည်းအား shop.com.mm online shopping mall တွင် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ အဓိက အကြောင်းအရာများဂျပန်နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဆံပင်သားကို အားဖြည့်ပေးခြင်းဗီတာမင်များပြည့်ဝစွာပါဝင်ခြင်းဆံပင်များကို ပျော့ပျောင်းစေခြင်းဆံပင်အကျွတ်သက်သာခြင်းဆံပင်သားကို သန်မာစေခြင်းအိမ်အရောက်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ၀န်ဆောင်ခပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် Q10 Treatment Essence 115g SKUBO821HB19MJ68NAFAMZ Weight (kg)0.115 ဤပစ္စည်းကို ၀ယ်ပြီးအဆင်မပြေလျှင် ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်ပါသလား? ဤပစ္စည်းကို ၀ယ်ယူပြီး အဆင်မပြေမှု တစ်စုံတရာ ရှိပါက သင်လက်ခံရရှိသောနေ့မှ စ၍ ၇ရက်အတွင်း ပြန်လည် ပေးပို့ပြီး ငွေပြန်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။